Alaeze nke Ghana: Wagadu - Afrikhepri Fondation
Satọde, Ọktọba 16, 2021
Alaeze Ukwu Ghana: Wagadu
Dn narị afọ ndị mbụ nke oge anyị, Wagadu, obere alaeze dị n’etiti Senegal na Niger, n’ebe e si enweta ọla edo, nke ndị ezinụlọ Cissé Tounkara na-achị, mechara chịkọta Soninkés niile, ndị ọrụ ugbo .
Eze gbadoro ụkwụ na okpukperechi nke Wagadu-Bida, chi agwọ ahụ. Ọ bu aha "Kaya-Magan" ma ọ bụ "Eze Gold".
Emaghi nsogbu nke ihe nketa n'ihi na omenala na-eme ka nwa nwoke nke okenye nke eze.
Onye na-achị Wagadu nabatara ndị ahịa Alakụba bịara na narị afọ nke XNUMX na mpaghara a ha kpọrọ Ghana (site na aha aha ndị eze na-eyi "onye isi agha").
O kwere ka ha biri na isi obodo ya, Koumbi Saleh, gbanwere ngwaahịa ha maka ọla edo, mana na-enyocha ha anya, n'ihi na o debere nzuzo nke mmalite nke ihe a dị oke ọnụ.
Ndị Wagadu mechara na-achịkwa ndagwurugwu Senegal na ọtụtụ n'ime Niger Delta.
Ọ bụ n'ime alaeze ukwu a nke mbụ ndị ahịa na ndị omenkà pụtara.
Site n'isi obodo ya, eze ukwu na-achị alaeze ukwu ekewara na mpaghara na alaeze nwere usuu ndị agha 200. Ndị gọvanọ, ndị eze, ndị ozi na-enyere ya aka ịchị ndị ya gụnyere agbụrụ atọ: ndị a ma ama (ndị ahịa, ndị ọrụ ugbo, ndị isi ala…), ndị nwere ọ (ụ (ndị omenkà, ndị dike) na ndị ohu (ndị mkpọrọ)
Ọ dabere na akụ na ụba siri ike: ọrụ ugbo na-eme nke ọma na South, ịzụ ụmụ anụmanụ na North; Azụmaahịa, ọkachasị trans-Saharan, na-aga nke ọma (ọla edo, zoo, ọka, ndị ohu, wdg), ọla edo na igwe igwe na-egosi enweghị ike ịgwụ, njem na-emepe emepe.
Ọchịchị alaeze ukwu a na - adọta anyaukwu nke ndị agbata obi ya bụ ndị Alakụba. Site na 1042, Berbers ghọrọ onye Alakụba, ndị Almoravids, malitere Wagadu. Ewere obodo Aoudagost na 1057, mgbe ahụ Koumbi Saleh na 1076 mana weghaara ya na 1087.
Otú ọ dị, Wagadu adịghị ike ma malite ịmalite nwayọọ nwayọọ site na nkwalite nke na-aga n'ihu.
Ndi mmadu nke alaeze ukwu na-emegide Islam, nke ndi mmanye mmanye, kwagara South ma obu East. Mba ahụ na-ebelata ọnụ ọgụgụ ya na ndị agha ya enweghị ike. Yabụ, alaeze ndị dịka nke Mali ma ọ bụ Diara na-ewere nnwere onwe nke ịhapụ alaeze nke ga-aghọ obere alaeze.
N'otu oge ahụ, ihe mere ka ọganihu ya (ahia, ịzụlite, ọrụ ubi, ebe a na-egwupụta akụ) na-ahazighị ahazi. Offọdụ n'ime vassal steeti na-eji nke a eme ihe. Otu n'ime ha, Sosso nke nnukwu Soumaoro Kante, jidere Wagadu na mbido narị afọ nke 13.
Edemede ndị a tụrụ aro
You maara mmepe nke Nok?
Alaeze Ukwu Songhai
Nwebiisinka © 2022 Afrikhepri
Ọ bụrụ na -amasị gị, biko kesaa ibe a. I nwekwara ike biputere edemede gị na saịtị a.
Window a ga-emechi na nkeji 10